I-Mixology: I-Ultrasonic Homogenizer yama-Cocktail Bar - I-Hielscher Ultrasound Technology
Namuhla, imishayo eyinkimbinkimbi isebenza ngamathuluzi amasha kakhulu ukudala ama-cocktails kanye neziphuzo eziyingqayizivele.
Ephefumulelwe yi-cuisine yamangqamuzana, abasebenza nge-ultrasonic basebenzisa ama-homogenizers ama-ultrasonic ukuze bathole iziphuzo, bahlanganise ukufudumala neminyaka yobudala yewayini noma imimoya.
I-UP200Ht ye-Hielscher ithandwa kakhulu kusukela i-mixer ye-ultrasonic iyasebenza, kulula ukuyisebenzisa futhi iveza ukuzwakalisa kuzivakashi zebha.
Ukuxuba Iziphuzo nama-Wax Ultrasonic
Amakhemikhali nemishayo yanamuhla ngokuvamile ifakwe amathuluzi athakazelisayo, avela esibhedlela noma e-apothecary. Abapheki nabadayisi basebenzisa ama-evaporator ajikelezayo, amakamelo okugcoba, nemishini yangaphansi kwemishini. Ama-homogenizers e-ultrasonic athola ngokushesha indlela yawo ekhishini nasemiphakathini, futhi. Amagagasi e-Ultrasound avumela ukuthi akhiphe futhi aphuze iziphuzo ngama-flavour amasha, emidlalweni yobudala newayini kanye nokuxubusha imifino yamafutha / yamanzi ngemizuzwana. Le nqubo ye-infusion esheshayo ivula insimu entsha ukwakha isipiliyoni sokunambitheka kwe-novel kanye nenhlanganisela ye-flavour. Ngokuvamile ama-botanicals afana namakhambi, izinongo kanye nezinkuni zivame ukusetshenziswa.
Ngomxube we-ultrasonic njenge- UP200Ht, isibonelo i-whiskey ingafakwa ngama-oak chips bese iphendukela ku-whisky enephrofayela ye-flavour njengokungathi ibheyili eneminyaka eminingi.
Ultrasonic Iziphuzo: Ungadliwa
I-Ultrasonic New Orleans Gin Fizz
5ml (0.1 oz oz.) Amanzi amanzi e-orange
I-15ml (0.5 fl. Oz) ijusi lika-lime
20ml (0.7 fl oz) usiraphu ushukela
1 i-vanilla pod
1 amaqanda amhlophe
25ml (0.8 fl oz) ukhilimu kabili
Engeza i-gin ne-vanilla pod ibe beaker.
Thela ama-vanilla pods cishe nge-pestle.
Sonicate i-vanilla pod ku-gin nge-approx. 3 iminithi.
Gwema i-gin ukususa i-vanilla pod.
Yengeza i-gin, i-orange, i-lame, i-lemon juice, i-lame, i-lame, ne-cream kabili.
Shake ngamandla ngamasekhondi angu-25.
Engeza i-ice bese unyakaze imizuzwana engu-30 ngaphezulu.
Ingxube engxenyeni yeglasi engama-8-ounce.
Khipha kancane kancane amanzi e-soda phansi emaphethelweni wangaphakathi womthunzi ukuze ukhulule ama-froth asele.
Hamba ngomusa ukuxuba amanzi / i-froth mix on isiphuzo bese ukhonza.
I-Ultrasonic Basil Smash
50ml (1.6 oz oz) i-Gin kaHendrick
6-8 amaqabunga ase-basil
25ml (0.8 fl oz) ijusi elimnandi lemon
15ml (0.5 fl. Oz) isiraphu ushukela
Beka i-basin ye-gin ne-lemon ibe yi-beaker bese udaka ngokushesha.
Engeza i-gin bese ukhuluma nge-approx. 3 iminithi.
Gcwalisa ingxube ye-sonicated ibe yi-cocktail shaker eneqhwa.
Engeza isiraphu yeshukela bese ushaqa ngamandla.
Ukucindezela kabili phezu kweqhwa eklasini lombala futhi uhlobise ngamacembe ase-basil.
Isiphephelo: Ultrasonic Negroni
25ml (0.8 fl oz) Campari (noma i-Aperol uma ukhetha iphrofayli enambitheka kakhulu)
I-12.5ml (0.4 fl. Oz) Martini Rosso
I-12.5ml (0.4 fl. Oz) Vermouth Emnyama
Engeza zonke izithako zibe yi-beaker.
Sonicate ingxube ne-UP200Ht ye-approx. 4 iminithi.
Yakha isiphuzo edwaleni ingilazi phezu kweqhwa.
Hlobisa nge-peel orange.
Funda kabanzi mayelana nokwehliswa kwe-ultrasonic yemimoya kanye nokuphuza utshwala kanye ne-ultrasonic fat-washing of alcohol!
Njengoba elula, i-ultrasonicator eqinile, i UP200Ht ilungele uku
iwayini elidala & i-whisky
I UP200Ht i-ultrasonic cocktail mixer, eguquguqukayo futhi elula ukuyisebenzisa. Ivumela abaqhubi bezintandokazi kanye nabachwepheshe bezinhlanganisela zokwenza iphunga eliyingqayizivele, ama-infusions a-flavour-intense kanye nama-emulsions amahle namaxube eminithini.
Mayelana nokuxuba kwe-Ultrasonic
Ukuhlanganiswa kwe-ultrasonic kanye nokukhipha kusekelwe ekuhlanganiseni kwamaza a-ultrasonic ibe yiketshezi. I-cavitation ye-Ultrasonic iphula izakhiwo zamaselula ukuze izingxenye eziboshwe zikhishwe ku-liquid elizungezile. Yingakho ukuxubana kwe-ultrasonic kanye ne-extraction kuphumelela kakhulu ekungeniseni iziphuzo ezidakayo. Isibonelo, lapho uguqula izimbali ze-lavender ku-vodka, amabutho e-ultrasonic aphula izindonga ze-lavender nezimbali nama-molecule aphuzi namafutha esisekelo avela ngaphakathi kwe-cell akhishwa kwi-vodka. Ngemuva kokunciphisa izimbali ze-lavender ekuphuzweni utshwala, i-vodka isala njengesiphuzo esiphuze kakhulu se-lavender.
I-mixology ye-molecular yindlela yokudala i-cocktail usebenzisa imishini namasu we-gastronomy yamangqamuzana. Lezi amathuluzi namasu kunika amandla ukudala amandla amakhulu kanye nezinhlobonhlobo ezintsha zokunambitheka, inhlanganisela eyiphundu eyiphundu kanye / noma ukubukeka okusha kwe-cocktails. Izindlela ezivame ukusetshenziswa ama-mixologists ezidala zihlanganisa ukuphefumula, ukumiswa, ukumnika futhi emulsification. Ikakhulukazi kulezi zinsuku ezimbili zokugcina i-ultrasonication yindlela, eyenza ama-flavour amahle.